OweMaritzburg ukafuni baphindwe yinduku efanayo
UDAYLON Claasen weMaritzburg United ufuna babhukule ukuze bangazitholi bevika izembe kwiDStv Premiership njengoba kwenzekile ngesizini edlule Isithombe: BACKPAGEPIX
Sithembiso Mkhize | September 10, 2021
ENYE yezinsika zeMaritzburg United, uDaylon Claasen, ithi wonke umdlali waleli qembu uyakuqonda ukuthi kuyabaphoqa ukuthi babhukule ukuze bagweme ukuklinyeka abakuzwe ngesizini edlule, bebalekela izembe kwiDStv Premiership kwaze kwaba sekugcineni.
Nakulokhu kubukeka ziqhamuka izimpawu zokungaholela iTeam of Choice ophathe njengoba isahlulekile ukunqoba emidlalweni emibili yokuqala yeligi.
Zisuka amagqozo kweka-2021/22, isishaywe omkhaya bayo iLamontville Golden Arrows neSekhukhune United.
Nangesizini edlule yavula ngenduku, ishaywa emidlalweni emihlanu kulandelana.
Lesi sibhaxu saqalwa yiBaroka, iMaritzburg ezobhekana nayo ngoMgqibelo koqala ngo-3 ntambama, ePeter Mokaba Stadium.
Mhlawumbe ezika-Ernst Middendorp sezingaduduzwa ukuthi nayo iBakgakga iphuma ekushayweni yiKaizer Chiefs.
Okwehlukile ukuthi yona yashaya omkhaya bayo iMarumo Gallants kowokuqala.
UClaasen oke wadlala kwiTSV 1860 Munich yaseGermany, uthe:" Okuhle ukuthi singabadlali beMaritzburg United siyasiqonda isimo esikuso. Wonke umdlali uyazi ukuthi kulindelweni kuye. Kasifuni ukuzibona siphindwa induku eyodwa. Lisisize kakhulu ikhefu leFifa. Sibe namasonto amabili agcwele okulungisa amaphutha enzeke emidlalweni edlule. Okudlule sekudlule, kumele sigxilise imiqondo yethu emdlalweni weBaroka,“ kusho yena.
Uthe uma bengaphumelela kwiBaroka kuzobe sekulandela neminye imiphumela emihle.
“Ngikholelwa ekutheni ukunqoba kuyo (iBaroka) kuzosivulela inhlanhla. Kuyasiphoqa ukunqoba, indawo esikuyo kwi-log kayiyinhle.”
UClaasen ogijime imidlalo ewu-29 yeDStv Premiership nowodwa weMTN8 ngesizini edlule, ube esebongela uzakwabo, uBongokuhle Hlongwane, ngokushaya igoli elinqobise iBafana Bafana kwiGhana kowokuhlungela iNdebe yoMhlaba ezoba seQatar, ngonyaka ozayo.
"Ngiyambongela uBongokuhle, ngihlale ngimtshela ukuthi uwumdlali wezinga eliphezulu. Akaqhubeke nokusebenza kanzima, lukhulu luyeza,“ usho kanje.